Umvelisi kunye neFektri ephezulu ye-2L ephathekayo yeoksijini yomvelisi kunye neFektri | UFuluoEr
Umvelisi we-2L ophathekayo we-oksijini we-SK9000 wenqwelo-moya ye-oksijini
I-K9000 sisizukulwane esitsha se-oxygen concentrator ephathekayo, imodeli ye-SK9000, inobunzima obumalunga ne-2.5kg, inokusetyenziswa kwizithuthi okanye ekhaya, iyifashoni kwaye ilungele ioksijini concentrator.
I-SK9000 inemisebenzi ephambili eli-12 yokukhusela ubomi kunye nosapho. Uyilo olusebenzayo lusebenziseka lula, ukuhamba kweoksijini kwe-2L, ukusebenza kweatomization, ukusebenza kwexesha, ukusebenza kakuhle kwecompressor, ukunciphisa ingxolo enzulu, ukucacisa isikrini sokucoca, ukucoca ioksijini engalunganga, ukusilela kweAlarm, ulawulo olukude ngaphandle kwamacingo, icebo lokucoca ulwelo Ukucoca, kufanelekile kwabasetyhini abakhulelweyo, ukungeniswa kwesisele seemolekyuli, njl., Imisebenzi igqityiwe.
I-SK9000's 2L oxygen flow inokuhlengahlengiswa, kwaye unokuhlengahlengisa ukuhamba kweoksijini ukuze kulungele umzimba wakho ngokuthanda. Ukongeza kokuyisebenzisa ekhaya, unokuhamba nayo naphi na apho uya khona, ukudibanisa impilo kuyo yonke indawo yobomi bakho. Ewe, ukusetyenziswa kwayo kulula kakhulu. Kuqala ufakela iadaptha yemoto, emva koko ucofe ixesha elide ukutshintsha imo yokusetyenziswa, kwaye ekugqibeleni unxibe i-inhaler yeoksijini yokuphefumla ioksijini ngokulula.
I-SK9000 inokusetyenziswa ngabantu abaninzi, ukuze wena nosapho lwakho nibe ngokukhululeka kwaye niyisebenzise ngoxolo lwengqondo. Abantu abadala, abasetyhini abakhulelweyo, abafundi, abasebenzi bekhola emhlophe, njl. Banokuyisebenzisa ngokuzithemba.
I-SK9000 idlulile ukuqinisekiswa kabini kwe-FDA / CE, kwaye umgangatho uvavanyiwe kumanqanaba ngamanqanaba. Ndiyakholelwa ukuba iya kuba liqabane elithembekileyo ebomini bakho!
Egqithileyo Isitshayina esona brand sinexabiso elinexabiso eliphantsi kumatshini ophathekayo we-biPAP umatshini womoya ophefumlelweyo we-4-30cm i-h2o inqanaba lokugcina elinokutshintshwa
Okulandelayo: Isitshixo se-1 sokulinganisa ngokulula i-KJM-L8 — Uvavanyo lweGazi loVavanyo / Ukulinda koSapho